महिला फ्यान जबरजस्ती अमिताभको कोठामा छिरेर सारी खोल्न थालेपछि ! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
महिला फ्यान जबरजस्ती अमिताभको कोठामा छिरेर सारी खोल्न थालेपछि !
एजेन्सी । एक महिला फ्यानले एक समय अभिनेता अमिताभ वच्चनलाई ठूलो समयस्यामा पारिन् । अमिताभ कुनै फिल्मको सुटिङको लागि बाहिर गएका थिए । जब सुटिङ पछि उनी आफ्नो कोठामा फर्किए तब उनले त्यहाँ एकजना केटी आफ्नो पर्खाइमा बसेको देखे ।
अमिताभले शालीनतापूर्वक ती युवतीलाई आफू एकदमै थाकेको र आराम गर्न चाहेको बताए । तर, ती युवती अमिताभलाई मोहित बनाउनतिर लागिन् । उसले आफूले अमिताभलाई उकदमै माया गर्ने बताउन थालिन् । ती युवतीको प्रेम प्रस्ताव सुनेर बीग बी हैरान भए । उनले ती युवतीलाई त्यहाँबाट निस्किन भने तर ती युवती जान तैयार भइनन् । उल्टै भित्रबाट ढोका बन्द गर्न थालिन् ।
यतिमात्र होइन उनी अमिताभलाई ब्ल्याकमेल गर्न थालिन् । उसले आफ्नो सारी अमिताभकै अघि खोलिन् । यति गरेर आफ्नो कुरा नमाने चिच्याउने धम्की दिइन् । ती युवतीको धम्की पछि अमिताभ एकछिन शान्त भएर कुरा गर्न थाले । एकछिन पछि उनले चिया मगाउनका लागि फोन गरे । युवतीले कसैलाई नबोलाउन फेरि पनि धम्की दिइन् ।
जब चिया बोकेर आएका वेटरले ढोका ढक्ढक्याए । ढोका खोल्न गएका अमिताभको पछिपछि आइन् । अमिताभले त्यसपछि उनलाई पाखुरामा समातेर बाहिर पठाएर ढोका बन्द गरे । ती युवतीलाई बाहिर पठाएपछि अमिताभले रिसेप्सनिस्टलाई फोन गरेर ती युवतीले आफूलाई दुःख दिइरहेको बताए । त्यसपछि होटलका कर्मचारीहरु आएर ती युवतीलाई त्यहाँबाट निकालेका थिए ।